Kune akawanda mamiriro ezvinhu umo mutemo wemhosva unoshanda. Funga, semuenzaniso, yemamiriro ezvinhu apo mushandi anokuvadza mutsauko mukati kana mukati mekuita kwebasa rake. Pakadaro, dzimwe nguva mushandirwi anogona kutongerwa mhosva zviri pamutemo kumushandi nekuda kwekukuvara kunenge kwaitika.
ZVINODAIWA NEMARI INONYANYA?
Kune akawanda mamiriro ezvinhu umo mutemo wemhosva unoshanda. Funga, semuenzaniso, yemamiriro ezvinhu apo mushandi anokuvadza mutsauko mukati kana mukati mekuita kwebasa rake. Pakadaro, dzimwe nguva mushandirwi anogona kutongerwa mhosva zviri pamutemo kumushandi nekuda kwekukuvara kunenge kwaitika. Mune zvimwe zviitiko, vagadziri vanogona kuve nemhosva. Izvi ndizvo zvakaitika kana mutengi achitambura kukuvadzwa uye ikamiswa kuti kukuvara kwakakonzerwa nehurema muchigadzirwa. Zvakare, maneja wekambani mune dzimwe nguva anogona kuve nemutoro wega mukuwedzera kune kana panzvimbo yekambani.
> Mutoro wevashandirwi
> Chikwereti chechigadzirwa
> Mutoro weDirector
> Chikanganiso-chakatemerwa mhosva
> Professional dhiza
Uri kubatwa nemhosva here kana kuti unoda kubata mumwe munhu chikwereti? Mhosva magweta kubva Law & More ichafara kukupa rutsigiro rwemutemo.
Mienzaniso yezvidzidzo zvatinogona kukubatsira iwe:
• Mutoro wevashandirwi;
• Chigadzirwa dhayeti;
• mutoro weDirector;
• Chinetso chakasimba;
• Kukanganisa-kwakavakirwa mhosva;
• Professional dhiza
Iwe uri kubata nerevo yekukuvara uye iwe ungada rubatsiro rwepamutemo mumaitiro here?
Kana mushandi akakuvara netsaona panguva kana kuti ine chekuita nebasa rake, mushandirwi anogona kuve nemhosva kumushandi pamutemo nekuda kwekukuvara kwaitika. Izvi zvinodaro nekuti mushandirwi ane chisungo chakakosha chekuchengeta kana basa riitwa. Iye ane mhosva yekukuvara kwakatambudzwa nemushandi panguva yekuita kwebasa rake, kunze kwekunge iye anogona kuratidza kuti azadzisa chisungo chake chekutarisira. Kana mushandirwi anogona kuratidza kuti atora matanho ese anodzivirira kudzivirira tsaona, haana mhosva. Zvakare, mumamiriro ezvinhu ekuti mushandi akave asina chinangwa kana nemaune, mushandirwi haakwanisi kupomedzerwa. Isu tinotarisa kune ese chokwadi nemamiriro ezvinhu uye tichafara kukubatsira iwe kana iwe uchinge uchinge uine mutoro sewe mushandirwi kana kana iwe uchida kubata waunoshandira ave nemhosva yekukuvara kwakatambura.
Paunenge watenga chigadzirwa, unotarisira kuti chichava chakasimba. Iwe hautarisire kuti kushandiswa kwayo kuchakukuvadza. Nehurombo, izvi zvinogona kuitika. Iwe unogona kufunga nezve kukuvara kunokonzerwa nemushini wakaremara, chikafu uye zvimwe zvigadzirwa zvevatengi.
Iyo inogadzira inokodzera zviri pamutemo kukuvadzwa kana kuchinge kwaratidzwa kuti kukuvara kwakakonzerwa nehurema muchigadzirwa. Chigadzirwa chinotaridzika sechisina basa kana chisingapi chengetedzo yauri kutarisira kubva kwachiri. Kana iwe wakakuvadzwa kukuvara nekuda kweichi chigadzirwa chakashata, isu tichafara kukupa rubatsiro rwepamutemo.
Muchokwadi, kambani inokweretwa nezvikwereti zvinowanikwa. Nekudaro, mukuru wekambani anogona mune dzimwe nguva kutongwa ave nemhosva yekuwedzera kune kana panzvimbo yekambani. Mutungamiriri anomanikidzwa kuita mabasa ake nemazvo. Kana iwe uchinge uine mhosva semutangamiri wesangano repamutemo, mhedzisiro inogona kuva yakakura. Law & More inobatsira varidzi vakatarisana kana kutyisidzira nekupomerwa mhosva. Isu tinobatsirawo mapato anoda kubata director zviri pamutemo.
Rudzi urwu rwemhosva rwakatemerwa pamusoro pekukanganisa kana kusava nehanya. Kana iwe wakakuvadzwa kukuvara, isu tichafara kukubatsira iwe kubata munhu uyo ​​akakonzera kukuvara iyi pamutemo mhosva. Iwe unogona zvakare kubata nesu kuti tivatsigire zviri pamutemo kana iwe uchinge uine mhosva nemumwe munhu nekuda kwekukuvara.
Kana nyanzvi inozvishandira, yakadai sachiremba, accountant kana muripo, ikakanganisa nyanzvi, anogona kuve nemhosva kune vatengi kana varwere. Asi mune zviitiko zvipi apo iyo kusarongeka kwehunyanzvi kunoitika? Uyu mubvunzo wakaomarara. Mhinduro yacho inoenderana nezvose chokwadi nemamiriro ezvinhu emhosva yacho.
Kana iwe uri nyanzvi inozvishandira uye mukabatwa nemutoro wekutadza nyanzvi, isu tichafara kukubatsira.